राजु अधिकारी – MySansar
Author: राजु अधिकारी
यस्तो पनि ‘कविता’ हुन्छ? मैले नबुझेका ‘कविताहरु’
Posted on July 20, 2019 July 20, 2019 by राजु अधिकारी
साहित्यमा रुचि राखे पनि साहित्य बुझ्नु मेरो क्षमता बाहिरको कुरो हो। तर पनि सानैदेखि नै मैले महेन्द्रमालामा भएका सबैजसो कविताहरु घोकेर कण्ठस्थ पारेको हुन्थें अनि मौका पाउनासाथ तिनै कविता गुनगुनाइ हाल्थेँ। मैले आजसम्म कविता लेखेको छैन। कथा, निबन्ध, नियात्रा, समालोचना आदि लेखन भन्दा कविता लेखन साहित्यमा सबैभन्दा प्रसिद्ध र सबभन्दा गाह्रो कुरो हो। साहित्य भन्ना… Continue reading
आजभोलि उहाँलाई निकै शरम लाग्न थालेको छ रे । हुन त उहाँ शरम मान्ने मान्छे होइन, तर पनि खै के कारणले हो शरम मान्न थाल्नु भएको छ रे । मैले भनेको होइन, उहाँ आफैले भन्नु भएको । त्यसमा पनि खास गरी उहाँलाई शरम लाग्ने भनेको बुद्धिजीवीहरूसँग मात्र हो, अरूसँग त शरम मान्नुहुन्न । बिचरा पढ्ने… Continue reading
कथा : जब स्वर्गका राजा बने यमराज
Posted on February 16, 2019 by राजु अधिकारी
यमराजलाई मरेका मान्छेहरूसँग दिनदिनै व्यवहार गर्दा एक दिन दिक्क लागेछ। यस्तो पनि जिन्दगी हो? सायद तेत्तिस कोटि देवताहरू मध्य सबभन्दा व्यस्त उनी नै होलान् तर त्यत्रो काम गर्दा पनि कसैले पनि उनलाई राम्रो नजरले हेर्दैन। अझ मर्त्य लोकका जीवात्माहरुका लागि त उनी त शत्रु नै हुन्। यस्तो काम पनि कसैले गर्छ? ठोक्दिन्छु राजीनामा भनेर दृढ… Continue reading
Posted on April 21, 2018 April 21, 2018 by राजु अधिकारी
-राजु अधिकारी- देशमा लोकतन्त्र दिवस धूमधामसँग मनाइँदै थियो। लोकतन्त्रको त्यो उत्सवमा सबैमा उल्लास थियो। तर उ भने निराश थियो। पत्रकारिता पेसामा लागेको पाँच वर्ष हुँदा पनि उसले त्यो पेसामा आफूलाई अझै राम्ररी उभ्याउन सकेको थिएन। बाहिरबाट देख्दा नाम, काम र दाम सबै देखिने त्यो पेसा भित्रबाट त्यति आकर्षक थिएन। त्यहाँ पनि सङ्घर्ष थियो, खुट्टा तानातान… Continue reading
कथा : पूर्व प्रेमिका
Posted on July 29, 2017 July 29, 2017 by राजु अधिकारी
प्रिय पत्नी कुसुम, प्रविधिको यो युगमा मेरो चिठ्ठी देख्दा तिमीलाई आश्चर्य लाग्ला तर फोनबाट यी सबै कुराहरु तिमीसंग बताउन मलाइ अलि अप्ठ्यारो लागेकोले मैले यो चिठ्ठीको सहारा लिएर तिमीलाई आफ्नो मनको कुरा स्पष्ट पार्न खोजेको छु। आशा छ तिमीले यो चिठ्ठी शान्त मनले पुरै पढेर मात्रै आफ्नो प्रतिक्रिया दिने छ्यौ। तिमीहरु नेपाल फर्केको पनि लगभग… Continue reading